फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - कालो तेलको सेतोे व्यापार !!
कालो तेलको सेतोे व्यापार !! नरनाथ लुइँटेल
महान् भारतका महान् मोदीको महान् निगाहले नेपाल भारत सीमा नाकाहरू ठप्प छन् । त्यही महान् भारतले उत्पादन गरेका यातायातका खटारा साधनहरूमा सवार हुन अभ्यस्त हामी नेपालीहरूले पिउने पानी भन्दा बढी कालो तेल उपभोग गरिरहेका छौँ । अघोषित नाकाबन्दीका कारण घोषित नाकाबाट कालो तेल आउन दिइएको छैन । घोषित नाकाहरूलाई बन्द गरिएपछि अघोषित नाकाहरू खुलेका छन् । नाकाबन्दीको पुनित अवसरलाई उपयोग गरी रातारात करोडपति बन्ने आकाङ्क्षीहरू कालो तेलको सेतो व्यापारमा जमेर लागेका छन् । कारोबार भयङ्कर चलेको छ । घोषित नाकामा रहेका भन्सारका कर्मचारी हाइ काडेर बस्नुको विकल्प नै छैन । करोडौँ राजस्व उठ्ने नाकामा सुका मोहर पनि उठ्न छाडेको महिनौँ भयो । खुला सीमाका अघोषित नाकाहरूबाट कालो तेल ओसारेर गरिएको सेतो व्यापारले सीमाक्षेत्रका केही सडक छापेहरूलाई लखपति बनाइ दिएको छ । यो सुखद पक्ष हुँदै हो । कसैले डाढो गर्नु र आहारिस गर्नुको अर्थ छैन । डाढो लाग्छ कसैलाई भने ग्यालिन बोकेर नाकातिर लागे भइहाल्यो नि !
जहाँसम्म आन्दोलनकारीको सवाल छ– बिहान बेलुकी बोतल, ग्यालिन, मोटर बाइक र ट्याक्टर सम्मको उपयोग गरी पारिबाट कालो तेल ओसार पसारमा सक्रिय भयो, दिउसोभरि जसगजामा तैनाथ, मेसको निशुल्क भान्सा । बस् तेहेरो फाइदा । अनि नाकाबन्दी नगरेर भो ? खुद्रे व्यापारीदेखि सीमानाका आसपासका बेरोजगार युवा केटाकेटी, वयोवृद्धसम्मका लागि आमदानीको यस्तो अपूर्व अवसर कहिल्यै आएको थिएन । पारि पाँच सय लगानी गरी वारि आइपुग्दा नपुग्दै पन्ध्र सय । पन्ध्र सय बोकेर पारि गयो, ग्यालिन भरेर वारि आइपुग्नासाथ पैँतालिस सय । पाँच हजारको पन्ध्र हजार, पन्ध्र हजारको पैँतालिस हजार । वा... कालो तेलको सेतो व्यापार !!
यो व्यापार बिस्तारै सीमा नाका नाघेर पूरै तराईबाट क्रमशः पहाड प्रदेश हुँदै राजधानी आइ पुगेको छ । राजधानी मात्रै सधैं हाहाकारमा रहने कुरै थिएन । आरम्भ भयो राजधानीमा पनि कालो तेलको सेतो व्यापार । ग्यालिन र ससाना ड्रमका भरमा मात्र आयातित कालो तेलले माग धान्न सम्भव नै थिएन । नाकाबन्दीको अवसरमा नाफा दोब्रिने मात्र होइन तेब्रिने यो अपारको व्यापारलाई तेलको एकाधिकार व्यापार गरिरहेको आयल निगमकै काला व्यापारीहरू टुलुटुलु हेरेर कहाँ बस्न सक्थे र ! अरूबेलामा समेत ब्ल्याक गर्न तम्सने डिपो सञ्चालकहरू घुटुघुटु थुक निलेर कहाँ बस्न सक्थे र !! रातारात उनीहरूको सक्रियता बढ्ने नै भयो । डिपोका मूल ढोकादेखि तिन किलोमिटर टाढासम्म लाइन देखिन्छ । पाँच लिटर इन्धनका लागि दुई दिन, तिन दिन, चार दिनसम्म आम उपभोक्ता लाइनमा खडा छन् तर तेब्बर मूल्य असुलेर कालो तेल भने चोर ढोकाबाट खुरुखुरु ड्रमका ड्रम र ठूलठूला ग्यालिनका ग्यालिन बाहिर । क्या गजब कालो तेलको सेतो व्यापार !!
आयल निगमकै टयाङ्कर समेत कालो तेलको सेतो व्यापारमा संलग्न भएको सुखद समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयकै स्वनामधन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि निगमका निर्देशक समेत आपूर्ति व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने खेलमा सरिक भइरहेको जानकारी प्रवाहित भइरहेको छ । यो हल्ला र संयोग मात्र होइन, बस्तुस्थितिले पनि यस्तै बताइ रहेको छ । सेना र प्रहरीद्वारा सञ्चालित डिपो समेत कालो तेलको सेतो व्यापारमा मुछिएका छन् । आम नागरिक एक दुई हप्ता खान नपाएर कहाँ मरिहाल्छन् त भन्या ! यता एक दुई हप्तामै चार पाँच पुस्तालाई पुग्ने गरी आमदानी सोहर्न पाइने यो नाकाबन्दी किन खुल्नु परेको छ र ! जाबो एउटा ट्याङ्करलाई डिपोसम्म आइ नपुग्दै दायाँबायाँ गर्ने बित्तिकै परल मूल्यभन्दा दस बाह्र लाख बढीको कुम्लो हात पर्ने स्थिति छ, अनि आयल निगमका खाइ पल्किएकाहरूको मुख रसाउँदैन त भन्या ? सरकार उत्तरी नाका केरुङ र तातोपानी खोल्न मरिमेटेर लागेको छ । भारतसँगको एकाधिकार तोडिनु भनेको चालिस वर्षदेखि नदेखिने किसिमले खाइपाइ आएको कमिसनको एकाधिकार पनि तोडिनु हो । यो त तोडिने पक्का भइ नै सक्यो । यता जोड्न ढिलासुस्ती गर्दै उता दुई चार हप्तामै करोडौँको लखनौ लुट मच्चाउन नसके जिन्दगी बर्बाद भएन त ! यस्तो नियति र नियतको भुङ्ग्रोमा सेकिँदै छ कालो तेलको सेतो व्यापार ।
राजधानीका डिपोमा अहिले न पेट्रोल डिजेल पाइन्छ, न ग्याँस र मटितेल । तर तपाइँलाई खनखाँचो परि हाल्यो भने तेब्बर वा चौबर मूल्य तिर्न तयार हुनुस् त, तपाइँ डिपो जानै पर्दैन ग्यालिन आफै आउँछ तपाइकै घर डेरामा । पाँच हजार रूपैया भन्दा माथि कबुल गर्नोस् त तपाइँको भान्सा खोज्न गुड्दै आउँछ ग्यासको सिलिण्डर आफैं । आर्थिक हैसियत नभएका लुला लङ्गडा, गरिब गुरुवा रित्तो सिलिण्डर लाइनमा राखेर सडकमा दिनभरिको घाम र रातभरीको चिसो बेहोर्न बाध्य छन् । न उनीहरू सरकारलाई गाली गर्छन्, न आयल निगमलाई सराप्छन् । सडकमा एक हप्ता कष्ट खपेर बल्ल बल्ल आधा सिलिण्डिर ग्यास पाउँदा पनि ऐश्वर्य फेला पारेको खुसीमा हर्क बढाइँ गर्छन् । न विरोध, न नारा जुलुस ! वा... कालो तेलको सेतो व्यापार ।
पक्कै हो यो नाकाबन्दीका कारण आयल निगम त टाट पल्टिने नै भयो । तर निगमका केही कर्मचारी भने धनकुबेर बन्ने नै भए । ए ओली सरकार ! रोक्ने आँट र हुती छ त यो कालो तेलको सेतो व्यापार ?? छ भने लौ न यसलाई सधैंभरिका निम्ति समाप्त पारूँ !!